जनस्वास्थ्यले देखेन छिमेकीको लापरबाही | चितवन पोष्ट दैनिक
जनस्वास्थ्यले देखेन छिमेकीको लापरबाही
२०७० फाल्गुन २४, शनिबार ०२:१८ गते
दर्ताविना नै फार्मेसी सञ्चालन
भरतपुर । पुरानो मेडिकल कलेज भनेर चिनिने कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस शिक्षण अस्पताल भरतपुर (सीएमएस)मा औषधी बिक्रीमा मनोमानी देखिएको छ । अस्पतालभित्र सञ्चालित औषधी पसल (फार्मेसी) मा राखिएको औषधीहरु मिति सकिएको समेत भेटिएको छ । त्यस्तै नेपालमा बेच्नका लागि अनुमति नै नदिएको औषधी पनि खुला रुपमा बिक्री भइरहेको पाइएको छ ।
औषधी बिक्रीमा देखिएको यो नौलो र नयाँ घटना भने होइन । जिल्लाका अन्य स्थानमा गरिएको अनुगमनमा यस्ता थुप्रै घटना भेटिएका थिए । अनुगमन गर्ने भन्दै लोथरदेखि मुग्लिन र माडीदेखि मेघौलीसम्म पुगे पनि जनस्वास्थ्य कार्यालयले आफ्नै छिमेकमा वर्षौदेखिको गल्तीलाई किन देखेन ? विषय सोचनीय बनेको छ । शुक्रबार औषधी व्यवस्था विभाग क्षेत्रीय कार्यालय बीरगञ्जबाट भएको अनुगमनका क्रममा पुरानो मेडिकल कलेज भित्रको फार्मेसी दर्ता नभइ सञ्चालनमा आएको पाइएको छ । त्यस्तै अनुगमनका क्रममा निमोनिया र लठ्याउन प्रयोग हुने औषधी मिति सकिएको पाइएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयका खाद्य निरीक्षक नविन देउजाका अनुसार कलेज फार्मेसी दर्ता नभएको र नेपालमा बिक्रीका लागि अनुमति नभएको औषधी पनि बिक्री हुँदै आएको पाइएको छ ।
करिव २० वटा औषधी पसल अनुगमन गरिएको देउजाले बताए । अनुगमनका क्रममा धर्मचोकमा एक खाद्य पसलमा औषधीसमेत बिक्री हुने गरेको पाइएको छ । ईन्दु कोल्ड स्टोर्स धर्मचोकमा मिति सकिएका औषधीसमेत बिक्री हुने गरेको भेटिएको हो । त्यस्तै क्यान्सर अस्पताल अगाडि रहेको जादुकी फार्मेसीमा मिति सकिएको औषधि भेटिएको छ ।
विभागले तीन दिनभित्र प्रशासन कार्यालयमा हाजिर हुन पत्र काटेको अनुगमनकर्ता देउजाले बताए । अनुगमनमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, औषधी व्यवस्था विभाग, जनस्वास्थ्य कार्यालयको सहभागिता रहेको थियो । यस मेडिकल कजेजको आडैमा जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय छ । शक्तिको आडमा आफ्ना गल्तीहरु गुपचुप राख्दै आएको यस मेडिकल कलेजको औषधी बिक्रीमा देखिएको चर्को लापरबाहीबारे सम्बन्धित निकायले के कस्तो कदम चाल्छ त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।
सेवा र सुविधाका हिसावले नेपालकै उत्कृष्ट मेडिकल कलेज भनेर कलेज प्रशासनले प्रचार गरे पनि उसले दिने सेवासुविधाका बारेमा भने व्यापक जनगुनासो आउने गरेको छ । बिरामी र तिनका आफन्तका अनुसार पुरानो मेडिकल कलेजले त्यहीँभित्र रहको फार्मेसीबाट औषधी किन्न बाध्य बनाउने गरेको छ । भनपा २ आँपटारी बस्ने देवराज गिरीको छोरा हिमाल गिरीको उपचारमा सिफारिस गरिएको औषधी मिति सकिएको पाइएको छ । अल्सरका बिरामी रहेका गिरीको दुई हप्तादेखि त्यहीँ उपचार गरी ५ दिन अघिमात्र डिस्चार्ज गरिएकोमा बिरामीलाई खानका लागि दिइएको औषधी क्लेरियन ५०० मिति सकिएको पाइएको हो । अगस्त २०११ मा बनेको र जुलाइ २०१३ मा मिति सकिएको यस औषधी खुलेआम बिक्री भएको पाइएको छ ।
साथै, देवराजले अस्पताल बाहिरको फार्मेसीबाट औषधी लान खोजे पनि हस्पिटलले यहीँ भित्रको पसलबाट किन्नका लागि बाध्य बनाएको उनले बताए । ‘बाहिर चिनेजानेका साथीभाइको औषधी पसल थियो, उनले भने, ‘तर मलाई विभिन्न बहनामा यहीँबाट किन्नका लागि बाध्य पारियो ।’
बिरामीको चेकजाँचपछि सम्बन्धित डाक्टरले औषधीको नाम चिटमा लेखिदिने र त्यो चिट बिरामीको आफन्तलाई नदिइ नर्स वा अन्यमार्फत फार्मेसीमा पठाउने गरेको पाइएको छ । पछि मात्र नर्सले बिरामीको आफन्तलाई तपार्इंको औषधी फार्मेसीमा छ गएर ल्याउनुहोला भन्ने गरेको गिरीले बताए । साथै, उनले औषधी लिनका लागि लामो समय लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यतासमेत हुने गरेको गुनासो गरे । त्यस्तै यस मेडिकल कलेजले तोकिएको मूल्यभन्दा दोब्बर तेब्बर महंगोमा औषधी तथा अन्य सामान बेच्ने गरेको पाइएको छ ।
पिसाव पाइप पनि भनिने फोलिस क्याथेटरको मूल्य बाहिर किन्दा ७० रुपैंयाँ मात्र परे पनि भित्रको फार्मेसीमा २ सय ७९ रुपैयाँ ५४ पैसा लिएको प्रमाण (बिल) फेला परेको छ । अन्य औषधीमा पनि निर्धारित मूल्यभन्दा चर्को मूल्य लगाउने गरेको पाइएको छ । त्यस्तै हस्पिटलले नेपालमा बेच्नका लागि सूचिकृत नगरिएको औषधि ‘एक्टाइड’ लाई फरक कम्पनीको औषधी ‘एक्ट्राइड’ एउटै हो भनी बेच्ने गरेको पाइएको छ ।
अन्य औषधी पसलमा औषधी राख्नका लागि झोला निःशुल्क पाइने भए पनि यस हस्पिटलले झोलाको समेत १ रुपैयाँ ५० पैसा लिने गरेको छ ।
सपना भिलेजले दियो १५ थान अक्सिजन सिलिन्डर
भरतपुर अस्पताललाई चितवन समाज क्यानडाको सहयोग
खैरहनीमा बजार अनुगमन, मापदण्ड पूरा गर्न निर्देशन
चितवन । सपना भिलेज सोसल इम्प्याक्टले दुई संस्थालाई १५ वटा अक्सिजनसहितको सिलिन्डर हस्तान्तरण गरेको छ । सो संस्थाले भरतपुर अस्पताललाई...
राष्ट्रियसभामा खिमलाल कि बादल ?
भरतपुर अस्पताललाई अक्सिजन सिलिन्डर सहयोग